FREDDIE OUT!!: Jamaahiirta Arsenal Oo Durtaba Ku Ololaynaya In Shaqada Laga Caydhiyo Ljunberg Oo Aan Wali Kulan Hoggaamin & Sababta Keentay. - Gool24.Net
FREDDIE OUT!!: Jamaahiirta Arsenal Oo Durtaba Ku Ololaynaya In Shaqada Laga Caydhiyo Ljunberg Oo Aan Wali Kulan Hoggaamin & Sababta Keentay.
December 1, 2019 Apdihakem Omer Adem
Jamaahiirta kooxda Arsenal ayaa si weyn uga cadhaysan macalinka qaabka kumeel gaadhka ah loogu dhiibay kooxdooda kaddib caydhintii tababare Unai Emery ee Freddie Ljunberg.
Arsenal ayaa haatan wajahaysa kooxda Norwich City kulankii ugu horreeyay ee uu Ljunberg hoggaamiyo balse taageerayaasha kooxda ayaa iyadoon wali kulanka la gaadhin cadho weyn ka qaaday shaxda uu soo xushay tababarahu.
Shaxda uu soo xushay Freddie ayay safka weerarka hoggaaminayaan Alexandre Lacazette iyo Aubameyang halka Mesut Ozil uu ka dambeeyo iyadoo Granit Xhaka oo ay dhawaan jamaahiirta isku dhaceen uu khadka dhexe kusoo bilawday.
Daafaca ree Germany ee Shkordan Mustafi ayaa mudo kaddib isaguna fursad helay waxaana uu daafaca dhexe kula lamaan yahay David Luiz halka Saed Kolasinac uu daafaca bidix ee shaxdan yahay iyadoo saxeexa cusub ee Tierney uu keydka ku jiro.
Jamaahiirta ayaan marnaba ku qancin go’aanada uu Ljunberg qaatay kulankiisa ugu horreeya iyagoo si gaar ahaaneed uga xanaaqad in saxeexa ugu qaalisan taariikhda kooxda ee Nicolas Pepe uu wali keydka kusii jiro.
Taageerayaashan oo dareenkooda baraha bulshada ku cabiray ayuu midka koowaad yidhi “Pepe la’aan, Emery hasoo laabto”.
Taageeraha labaad oo durtaba dalbanaya caydhinta Freddie Ljunberg ayaa isna yidhi “Freddie bax”.
Taageeraha saddexaad oo isna kusoo hal qabsanaya tababarihii shaqada laga caydhiyay ee Unai Emery ayaa yidhi “Waxaan filayay in Emery uu tagay?”.
“Pepe la’aan, FFSSSSS, Freddie bax” ayuu yidhi taageere kale oo cadho isna ka qaaday go’aanka uu wali Pepe ku fadhiyo.
Taageere kale oo ka cadhaysan safashada kulankan ee Xhaka iyo Ozil ayaa isaguna yidhi “Xhaka iyo Ozil….Ljunberg bax, Waxba kamuu baran qaladaadkii Emery”.
“Pepe oo keydka ku jira, Dambiilahan (Ljunberg) kooxdayda iiga saara” Ayuu yidhi mucaashaq kale oo Gunners ah oo Ljunberg ka cadhaysani.
Ugu dambayn, Waxa xusid mudan in qoraalka FreddieOut haatan uu kamid yahay kuwa inta ugu badan laga isticamaalay saacadihii ugu dambeeyay barta Twitter-ka.